Izinzuzo Eziphezulu Ezi-6 Zezempilo ze-Resveratrol Supplements （Most comprehensive）
Ikhaya > Izithasiselo Zokuvuselela
Uma ufuna indawo yokuthenga I-Resveratrol powder ngobuningi, inkampani eyodwa ongayethemba ngokungaboni ngokuthola impahla eluhlaza yiCofttek. Le nkampani, ngenxa yethimba layo lokucwaninga eliqinile kanye nomnyango wokuthengisa ozinikele, isungule ubukhona bomhlaba wonke ngesikhathi esincane nje - inamakhasimende nabalingani emhlabeni jikelele. I-resveratrol ekhiqizwe yinkampani iza ngamaqoqo amakhulu ama-25 kgs futhi itholakala kwizithako ezisezingeni eliphakeme kakhulu, ngaleyo ndlela iqinisekise ukuthi izengezo ezikhiqizwe kuyo zingathenjwa ngekhwalithi nokusebenza kahle. Uma ufuna ukuthenga i-resveratrol ngobuningi, ukuphela kwendawo yokuthenga cofttek.com.
Imibuzo evame ukubuzwa ye-Resveratrol
I-Resveratrol (501-36-0) iyinhlanganisela ye-polyphenolic etholakala ezitshalweni eziningi kepha imvamisa kumavini. I-Resveratrol ivame ukubizwa nge-'stilbene 'ngenxa yesakhiwo sayo futhi iyisilbene esithandwa kakhulu. Ama-Stilbenes ayizinhlanganisela zezitshalo ezivame ukutholakala emndenini wamagilebhisi yize zikhona ngamanani amancane nakwezinye izitshalo. Ngaphakathi kwamagilebhisi, i-resveratrol ikhona esikhunjeni futhi isebenza njenge-phytoalexin noma ubuthi besitshalo, ivikela amagilebhisi ezifweni ezahlukahlukene.
Sekuyiminyaka eminingi, abacwaningi belokhu bedidekile ngamandla abantu baseFrance okudla ukudla okunothe ngamafutha agcwele kepha bahlala bengathinteki yizifo ze-coronary. Abantu abaningi bacabanga ukuthi i-resveratrol iyimpendulo yale 'French Paradox' Yesifo Senhliziyo. Eqinisweni, iwayini elibomvu lidlala indima encane ekwenzeni le 'French Paradox' isebenze. Ukudla nendlela yokuphila yizinto ezibaluleke ngokufanayo.
Lawo mazwe lapho kuthanda ukusetshenziswa kwewayini elibomvu, inani labantu litholakala lisebenzisa kuze kufike ku-0.2 mg we-resveratrol nsuku zonke. Kodwa-ke, emazweni amaningi lapho iwayini elibomvu lingathandwa njengaseSpain noma eNyakatho Melika, inani labantu livame ukungabi nalo i-resveratrol. Abakhiqizi, emhlabeni jikelele, ngakho-ke beza nezithasiselo ze-resveratrol ezithembisa izinzuzo eziningana zezempilo ngasikhathi sinye.
Umbuzo uwukuthi: ingabe i-resveratrol inomthelela njengoba lezi zengezo zithi? Ake sibheke okunye ukusetshenziswa kwe-resveratrol.
Kungani Sidinga i-Resveratrol?
Iwayini elibomvu lehlisa i-cholesterol, iqiniso iningi lethu elilaziyo. Kodwa-ke, ababaningi bethu abazi ukuthi yi-resveratrol yezakhi zezitshalo enikeza noma yiliphi iwayini elibomvu le ndawo. Kanye newayini elibomvu, i-resveratrol itholakala kokunye ukudla okuningi. I-Resveratrol (501-36-0) yaqala ukuhlukaniswa ngo-1939 futhi eminyakeni edlule, ucwaningo olwenziwe kule nhlanganisela lwembula izinzuzo zalo ezahlukahlukene zezempilo, nakho okuholele ekwandeni kwesidingo salesi sakhi. Ngaphandle kokwehlisa i-cholesterol, i-resveratrol yaziwa futhi ukukhulisa ukusebenza kwengqondo nokulawula umfutho wegazi.
Kulesi sihloko esichaza kabanzi nge-resveratrol, sixoxa ngemihlomulo, ukusetshenziswa kwayo, kanye nomthamo ophephile futhi sikukweluleka ngesengezo esingcono kakhulu se-resveratrol sika-2021 nokuthi ungawuthengaphi lo mkhakha wezitshalo ngobuningi. Kodwa-ke, ake siqale ngezisekelo kuqala.
Ziyini izinzuzo ze-resveratrol?
① Yehlisa Umfutho Wegazi
Ngo-2015, ucwaningo luveze ukuthi umthamo ophakeme we-resveratrol unciphisa umfutho wegazi we-systolic esibona njengenombolo ephezulu ekufundeni kwengcindezi yegazi. Umfutho wegazi ophakeme we-systolic uthathwa njengosongo enhlalakahleni yomuntu njengoba kwandisa ingozi yezifo zenhliziyo kumuntu. I-Resveratrol yehlisa umfutho wegazi ngokukhiqiza i-nitric oxide eningi, yona leyo edala ukuthi imithambo yegazi ikhululeke. Yize kunobufakazi obanele bokuthi i-resveratrol inciphisa ukucindezelwa kwegazi, ucwaningo oluningi ludinga ukwenziwa maqondana nomthamo ofanele. (1) Sonia L. Ramírez-Garza, Emily P. Laveriano-Santos,
② Kuyaziwa Ukuthuthukisa Impilo Yengqondo
Ucwaningo olwenziwe eminyakeni edlule lukhombisile ukuthi ukusetshenziswa kwewayini elibomvu ejwayelekile kunciphisa kakhulu ukwehla kokuqonda okubangelwa yiminyaka. Lokhu ikakhulukazi kungenxa ye-resveratrol ekhona ewayinini elibomvu. I-Resveratrol inezindawo ezilwa nokuvuvukala nezilahla i-oxidant futhi ivimbela ukusebenza kwe-beta-amyloids, ebhekele ukuqala kwe-Alzheimer's.
③ I-Resveratrol Inenzuzo Ikakhulu Kubantu Abanesifo Sikashukela
Eminyakeni embalwa edlule, izifundo eziningana zezilwane ziye kwenziwa ukucwaninga ngomthelela we-resveratrol kushukela. Ezilwaneni, i-resveratrol yandisa ukuzwela kwe-insulin futhi imise ukusebenza kwe-enzyme ebhekene nokuguqula i-glucose ibe yi-sorbitol. ISorbitol ushukela oholela ekucindezelekeni kwama-oxidative futhi obangela izinkinga kubantu abanesifo sikashukela. Lokho ngaphandle, ososayensi bakholelwa ukuthi i-resveratrol isebenza ku-AMPK, iprotheni enikeza ushukela, ibuye inciphise izinga likashukela emzimbeni.
May Ingavimbela Amaseli Omdlavuza futhi Ingakhuphula Isikhathi Sokuphila Sabantu
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-resveratrol ingavimbela ukukhula kwamaseli womdlavuza emzimbeni ngokuguqula isakhi sofuzo samangqamuzana omdlavuza. Okubaluleke kakhulu, ucwaningo lwezilwane luphinde lwabonisa ukuthi i-resveratrol ivimbela ukusakazwa kwemdlavuza exhomekelwa ngama-hormone ngokugxambukela kwindlela ama-hormone athile avezwa ngayo.
Ngokufanayo, umphumela wokuphakamisa amandla we-resveratrol ube yisihloko sengxoxo enkulu phakathi kososayensi. Ocwaningweni oluningi lwezilwane, i-resveratrol ithuthukise isikhathi sokuphila sesilwane esikhethiwe ngokusebenzisa amandla ezinye izinhlobo zofuzo ezaziwa ukulwa nokugcina izifo ezihlobene nobudala. Ososayensi balindela imiphumela efanayo kubantu. Noma kunjalo, ucwaningo olwengeziwe luyadingeka.
⑤ Kuyikhambi Eliphumelelayo Lesifo Sokuqaqamba Kwamalunga Nezinhlungu Ezihlangene
I-Resveratrol iyindlela ephumelelayo yokulwa ne-arthritis nobuhlungu obuhlangene. Le khompiyutha esekwe izitshalo ivikela umzimba emalungeni ahambisanayo kanye ne-arthritis ngokunciphisa ukuwohloka kwenhliziyo. Ezinye izifundo zezilwane zikhombisile nokuthi i-resveratrol ivikela amalunga ngokunciphisa ukuvuvukala.
⑥ Inikeza Ukuvikelwa Ngokulwa Nezifo Zenhliziyo
I-Resveratrol ivikela inhliziyo ngezindlela eziningana ezahlukahlukene. Izifundo zezilwane zikhombisile ukuthi leli khompiyutha livikela izifo zenhliziyo ngokumisa ukusebenza kwe-enzyme ethile, ehlangene nokukhiqizwa kwe-cholesterol. Okubaluleke kakhulu, njengoba i-resveratrol inezinto ezingama-antioxidant, inciphisa i-oxidation ye-LDL cholesterol, ebhekele ngokuyinhloko ukwakhiwa kwama-plaque ezindongeni ze-artery.
Ingabe i-Resveratrol ilungele isibindi sakho?
Inikeze ukuvikelwa kwesibindi ekulimaleni kwamakhemikhali, i-cholestatic, notshwala. I-Resveratrol ingathuthukisa i-glucose metabolism nephid profile futhi yehlise i-fibrosis yesibindi ne-steatosis. Ngaphezu kwalokho, ikwazile ukuguqula ukwakheka kwe-acid fatty acid.
Yikuphi ukudla okunzima esibindi?
Ukudla okungu-6 ongakugwema uma unesibindi esinamafutha
Utshwala buyimbangela enkulu yezifo ezinamafutha wesibindi kanye nezinye izifo zesibindi.
Ushukela ongeziwe. Hlala kude nokudla okunoshukela njengamaswidi, amakhukhi, amasoda, neziphuzo zezithelo.
Ukudla okuthosiwe. Lezi zinamafutha amaningi nama-calories.
Isinkwa esimhlophe, ilayisi, ne-pasta.
Ngingaqinisa kanjani isibindi sami?
Izindlela eziyi-13 zesibindi esinempilo
Yidla ukudla okunomsoco.
Sebenzisa utshwala ngendlela efanele.
Gwema ukusebenzisa izidakamizwa ezingekho emthethweni.
Gwema izinaliti ezingcolile.
Thola ukunakekelwa kwezokwelapha uma uchayeka egazini.
Ungabelani ngezinto zenhlanzeko yomuntu siqu.
Zijwayeze ukwenza ucansi oluphephile.
Landela izinkomba kuyo yonke imithi.
Ingabe i-Resveratrol ilungele izinso?
I-Resveratrol ingavimbela ukulimala kwe-renal, kufaka phakathi i-nephropathy yesifo sikashukela, ukulimala kwe-renal okubangelwa izidakamizwa, ukulimala kwe-renal okubangelwa i-aldosterone, ukulimala kwe-ischemia-reperfusion, ukulimala kwezinso okubangelwa yi-sepsis, kanye nezinso ezivalekile, ngemiphumela yayo ye-antioxidant nokusebenza kwe-SIRT1.
Ingabe i-peanut butter ine-resveratrol?
Amantongomane Butter: Amantongomane amnandi ukugqoka ama-apula nesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, kodwa futhi iqukethe ne-resveratrol (engafika ku-13 mg ngenkomishi ngayinye). I-peanut butter ingumthombo omuhle we-niacin nama-manganese.
Ingabe i-Resveratrol iyakusiza wehlise isisindo?
Sekukonke, ukuhlaziywa kwe-meta kwamanje kukhombisile ukuthi ukudla nge-resveratrol kwehlise kakhulu isisindo, i-BMI, i-WC kanye nesisindo samafutha, futhi kwandise kakhulu isisindo esinciphile, kepha akuzange kuthinte amazinga e-leptin ne-adiponectin.
Yini iResveratrol ayenzayo esikhunjeni?
I-Resveratrol ingangena kalula esikhungweni sesikhumba futhi inciphise inqubo yokuguga yesikhumba. I-Resveratrol nayo inezindawo ezilwa nokuvuvukala, anti-microbial, kanye ne-antioxidant, ngaleyo ndlela igcina isikhumba sakho siphilile futhi singenakho ukuqhuma nokuvuvukala.
Yiliphi iwayini elinenani eliphakeme kakhulu le-resveratrol?
I-Resveratrol ihlotshaniswa kakhulu namagilebhisi abomvu newayini elibomvu elenziwe ngamagilebhisi. Amawayini afana neMalbec, iPetite Sirah, iSt.Laurent nePinot Noir anokuqukethwe okuphezulu kunawo wonke ama-resveratrol.
Ingabe i-resveratrol ikhulisa amandla?
I-Resveratrol ichazwe njengokulingisa ukuvinjelwa kwekhalori, okuholela ekusebenzeni okuthuthukile kokuzivocavoca kanye nokuzwela kwe-insulin (ukwandisa izindleko zamandla), kanye nokuba nomphumela wokwehlisa amafutha emzimbeni ngokuvimbela i-adipogenesis, nokwandisa ukuhlanganiswa kwe-lipid ezicutshini ze-adipose
Ingabe i-Resveratrol ingcindezi yegazi ephansi?
I-Resveratrol ilamula ukwehliswa kwengcindezi yegazi ngokuxakile ngokudambisa amaprotheni oxidation, ikakhulukazi ngezikhathi zokuxineka kwe-oxidative, indlela engaba yinto evamile yama-molecule e-antioxidant.
Yikuphi ukudla okuphezulu ku-resveratrol?
Kungenzeka ukuthi usuvele usebenzise inani elifanele le-resveratrol. Kutholakala ekudleni okunjengamakinati, ama-pistachio, amagilebhisi, iwayini elibomvu nelimhlophe, ama-blueberries, ama-cranberries, kanye necocoa noshokoledi omnyama. Izitshalo okuvela kuzo lokhu kudla zenza i-resveratrol yokulwa nokutheleleka kwefungal, imisebe ye-ultraviolet, ingcindezi nokulimala.
Yikuphi ukudla okune-quercetin kakhulu?
I-Quercetin itholakala ngobuningi ngama-apula, uju, okusajikijolo, u-anyanisi, amagilebhisi abomvu, ama-cherries, izithelo ze-citrus nemifino eluhlaza. Phakathi kwemifino nezithelo, okuqukethwe yi-quercetin kuphakeme kakhulu ku-anyanisi. Umbala nohlobo lwebhalbhu kubonakala kuyisici esinqumayo sokuhlungwa kwe-quercetin ku-anyanisi.
Ingabe i-resveratrol iyakhuphula i-testosterone?
Abaphenyi bathole ukuthi amazinga e-testosterone esewonke ehle ngamaphesenti angama-23.1 phakathi kwabesifazane abathole isengezo se-resveratrol. Ngokuqhathanisa, amazinga e-testosterone akhule ngamaphesenti we-2.9 eqenjini le-placebo.
Kwenzekani uma udla omisiwe nsuku zonke?
Ukudla okunomsoco okunomsoco ngokudla kwakho kwansuku zonke kungakusindisa ekushodeni kwensimbi. Lawa magilebhisi omisiwe anama-calories aphansi kakhulu futhi ngokwemvelo amnandi. Futhi zinemicu emincane, ngakho-ke, zisiza umzimba uzizwe ugcwele isikhathi eside ngokwenziwa okuncane.
Ungathatha i-resveratrol eningi kakhulu?
Lapho ithathwa ngemithamo efinyelela ku-1500 mg nsuku zonke kuze kufike ezinyangeni ezi-3, i-resveratrol i-POSSIBLY SAFE. Imithamo ephakeme efinyelela ku-2000-3000 mg nsuku zonke isetshenziswe ngokuphepha izinyanga ze-2-6. Kodwa-ke, le mithamo ephakeme ye-resveratrol kungenzeka ukuthi idale izinkinga zesisu.
Ingabe i-Resveratrol testosterone ephansi?
I-Resveratrol inciphisa amazinga wokujikeleza kwe-androgen precursors kepha ayinamphumela ku-testosterone, dihydrotestosterone, PSA amazinga noma ivolumu ye-prostate.
Ingabe i-Resveratrol iyasebenza Ngempela?
Olunye ucwaningo lubonisa ukuthi i-resveratrol ingaxhunyaniswa nengozi ephansi yokuvuvukala nokuqina kwegazi, okunganciphisa ingozi yesifo senhliziyo. Kodwa ezinye izifundo azitholanga izinzuzo ezivela ku-resveratrol ekuvimbeleni isifo senhliziyo.
Yini iResveratrol eyenzela ubuso bakho?
Kusetshenziswe phezulu, i-resveratrol isiza ukuvikela ubuso besikhumba, iphazamise futhi isize ukwenqaba amathonya amabi emvelo, futhi ikhanyise ukubukeka okubukeka sengathi kukhathele. Ibuye inezindawo ezibalulekile zokuthambisa isikhumba ezingasiza ukunciphisa ukubukeka kokubomvu
Ngingathatha i-resveratrol engakanani nsuku zonke?
Umthamo ofanele we-resveratrol uncike ekusebenzeni lapho isithasiselo sithathwa khona. Isibonelo, ukwesekwa kokugeleza kwegazi lobuchopho kudinga abantu ukuthi basebenzise i-resveratrol ebangeni elingu-250-500 mg kanti lapho kunqunyelwe ukuvinjelwa kwe-aromatase, ibanga livame ukugcinwa cishe ngama-500 mg ngosuku.
Abantu abaphilile abathatha i-resveratrol ukuthuthukisa impilo yenhliziyo noma ukuthuthukisa impilo ende bayelulekwa ukuthi bagcine isilinganiso sabo phakathi kuka-150-445 mg. Kodwa-ke, labo abahlangabezana nanoma yikuphi ukuphazamiseka bayelulekwa ukuthi bagcine umthamo uphansi ku-5-10mg ngosuku. Uma uhlushwa noma yiziphi izimo, qiniseka ukuthi uthintana nodokotela wakho ngaphambi kokuqala nganoma imuphi umuthi
Ingabe iResveratrol ikhanyisa isikhumba?
Ezifundweni zezilwane nasezivivinyweni zomtholampilo, i-1% resveratrol ikhonjisiwe ukunciphisa i-pigmentation eyenziwe yi-UV lapho isetshenziswa phezulu esikhumbeni. Ama-analogs we-resveratrol, i-RTA ne-RTG, akhombise nemiphumela yokukhanyisa isikhumba somuntu ezivivinyweni zokwelashwa ezindaweni ezihloliwe (i-04% RTA, i-0.8% RTA ne-0.4% RTG).
Ufaka kanjani i-resveratrol ebusweni bakho?
UGreen uthi ngama-serum, uwasebenzise ngemuva kokuhlanza, noma uma usebenzisa i-toner esimisweni sakho sokunakekelwa kwesikhumba, khona-ke uzoyisebenzisa ngemuva kwalesi sinyathelo. Uma usebenzisa i-resveratrol kwisithambisi, khona-ke uzoyisebenzisa ngemuva kokuhlanza nokuthambisa, kabili nsuku zonke, ekuseni nakusihlwa.
Ingabe i-Resveratrol ilungele induna?
I-antioxidant ebizwa nge-resveratrol etholakala kumagilebhisi newayini elibomvu ingasiza ekuqedeni ukuphuma okungathandeki, isifundo esisha esivela ku-UCLA esitholakele. Lapho abacwaningi besebenzisa i-antioxidant resveratrol ohlotsheni lwamagciwane abangela induna, bakuthola kuvimbela ukukhula kwezimbungulu ezikhiqiza izinduna isikhathi esingapheli.
Ingabe i-resveratrol iphephile ngezinso?
Ingabe i-CoQ10 ilimaza izinso zakho?
Imiphumela emibi evela ku-CoQ10 ibonakala ingajwayelekile futhi imnene. Kubandakanya isifo sohudo, isicanucanu, nesilungulela. Izingozi. Abantu abanezifo ezingalapheki njengokuhluleka kwenhliziyo, izinkinga zezinso noma zesibindi, noma isifo sikashukela kufanele bakuqaphele ukusebenzisa lesi sithasiselo.
Yikuphi ukudla okuqukethe i-resveratrol ephezulu?
Kutholakala ekudleni okunjengamakinati, ama-pistachio, amagilebhisi, iwayini elibomvu nelimhlophe, ama-blueberries, ama-cranberries, kanye necocoa noshokoledi omnyama. Izitshalo okuvela kuzo lokhu kudla zenza i-resveratrol yokulwa nokutheleleka kwefungal, imisebe ye-ultraviolet, ingcindezi nokulimala.
Yimaphi amavithamini anzima ezinso?
Amavithamini ancibilikayo anamafutha (A, D, E no-K) maningi amathuba okuthi akhule emzimbeni wakho, ngakho-ke lawa ayagwenywa ngaphandle kokuthi kunqunywe udokotela wakho wezinso. Uvithamini A ubakhathaza kakhulu, ngoba amazinga anobuthi kungenzeka ngezithako zansuku zonke.
Yikuphi ukudla okusiza ukulungisa izinso?
Imifino enamaqabunga amnyama.
Ingabe i-Resveratrol Iphephile?
I-Resveratrol ethathwe kwimithamo efinyelela ku-1500 mg nsuku zonke ngomlomo ibhekwa njengephephile. Isikhathi sokuphuza, noma kunjalo, akufanele singeqi izinyanga ezi-3. Imithamo ephezulu ebangeni le-2000-3000 mg nsuku zonke ingathathwa kepha ayaziwa ukuthi abangela izingqinamba zesisu.
Abesifazane abakhulelwe nabancelisa ibele kufanele basebenzise izithasiselo ze-resveratrol ngamanani amancane. Kodwa-ke, kufanele bazame futhi bathole umthamo wabo odingekayo we-resveratrol emithonjeni yemvelo, njengesikhumba samagilebhisi kanye nejusi yamagilebhisi. Iwayini akufanele lidliwe yileli qembu.
Abantu abanenkinga yokuphuma kwegazi kufanele bangahlali kude ne-resveratrol njengoba inciphisa ukugeleza kwegazi. Ngokufanayo, abantu abaphethwe yizimo ezibucayi ama-hormone, anjenge-ovarian, i-uterine, noma umdlavuza webele kumele futhi bangahlali nokuhlinzekwa nge-resveratrol.
Ngabe iMalbec ilungele inhliziyo yakho?
Amagilebhisi aseMalbec anezinye zezikhumba ezikhuluphele kunazo zonke izinhlobo zamagilebhisi ewayini. Lokhu kusho ukuthi balayishwe ngama-resveratrol antioxidants ayizikhiye zempilo yenhliziyo nemithambo yegazi.
Ingabe i-Resveratrol ingabangela ikhanda?
Sibonise ukuthi i-resveratrol isebenza ngokwandisa umsebenzi we-endothelial vasodilator, okuholele abanye ukuthi baphakamise ukuthi i-resveratrol ewayinini elibomvu ingaba yimbangela ye-migraine.
Iyini imiphumela emibi yokuthatha i-resveratrol?
I-Resveratrol ayibonakali inemiphumela emibi ngemithamo yesikhashana (1.0 g). Ngaphandle kwalokho, ngemithamo ka-2.5 g noma ngaphezulu ngosuku, imiphumela emibi ingahle ivele, njengokucanuzela kwenhliziyo, ukuhlanza, isifo sohudo kanye nokungasebenzi kwesibindi ezigulini ezinesifo esingesona esinamafutha
Iyini i-resveratrol esetshenziselwa ukwelashwa?
Ukuthandwa okukhulayo kwe-resveratrol kungabangelwa ukusetshenziswa okuhlukahlukene kwalo mkhiqizo. I-Resveratrol supplements ithuthukisa ukulahleka kwesisindo kubantu abadala futhi ikhuthaza isikhumba esihle. Izithasiselo zeReveratrol, uma zithathwa ngaphambi kokuzivocavoca, nazo zandisa izinzuzo ezihambisana nokuzivocavoca kakhulu. Ucwaningo seluveze nokuthi iReververat yehlisa i-glucose yegazi futhi yathuthukisa ukuphuma kwegazi. Kwandisa ukuzwela kwe-insulin ngakho-ke, kubhekwa njengesengezo esihle sabantu abanesifo sikashukela. Iphinde ithuthukise impilo yenhliziyo ngokunciphisa ama-triglycerides. Okokugcina, kunciphisa umsebenzi wamaseli womdlavuza futhi uyikhambi eliphumelelayo lokulwa nokuqaqamba kwamathambo kanye nopende ngokuhlanganyela.
Ingabe i-Resveratrol inciphisa i-estrogen?
I-Resveratrol ikhonjisiwe ukucindezela ukwanda kwamangqamuzana womdlavuza webele we-ER-positive futhi omubi kumasistimu amasiko weseli. Isebenza njenge-agonist ye-estrogen noma umphikisi ngokuya ngezinhlobo zamaseli, i-estrogen receptor isoform, nokuba khona kwama-estrogens endo native
Ziyini izimpawu zokuthi kukhona okungahambi kahle ngezinso zakho?
Ushintsho lokuthi uchama kangakanani.
I-Pee enamagwebu, enegazi, ekhanyayo, noma ensundu.
Ubuhlungu ngenkathi uchama.
Ukuvuvukala ezandleni zakho, izihlakala, imilenze, amaqakala, ngamehlo akho, ebusweni, noma esiswini.
Imilenze engaphumuli ngesikhathi sokulala.
Ubuhlungu obuhlangene noma bethambo.
Ubuhlungu maphakathi emuva lapho izinso zitholakala khona.
Ngingayithatha yini i-resveratrol enenkinga ye-thyroid?
Le datha ikhombisa ukuthi i-resveratrol iyisithiyo senkulumo ye-NIS futhi isebenza kumaseli ejwayelekile e-thyroid. Ngaphezu kwalokho, i-resveratrol ibonakala inendima yokuphazamisa i-thyroid, ngakho-ke siphakamisa ukuqapha ngokufaka inani elikhulu le-resveratrol.
Iyiphi ifomu elihle kakhulu le-resveratrol?
Iwayini elibomvu line-resveratrol ephezulu kakhulu yokudla. Lokhu kungenxa yesikhathi esichithwa izikhumba zamagilebhisi ekubiliseni ukwenza iwayini elibomvu. Ukuba khona kukaResveratrol ewayinini elibomvu ngesinye sezizathu okungenzeka ukuthi uzwile kuthiwa kunempilo yenhliziyo.
Ngabe ama-apula ane-resveratrol?
Ithimba labaphenyi eWashington State University liveze ukuthi amagilebhisi, amajikijolo, amajikijolo, ama-strawberry nama-apula, anothe nge-resveratrol, ashisa amanoni ngokweqile. Nakhu ukuthi kanjani. Isu elisha lokuvimbela nokwelapha ukukhuluphala lilele kwi-antioxidant etholakala ezithelweni eziningi: i-resveratrol.
Kufanele Ngithenge Phi Resveratrol Powder ngobuningi?
Ngabantu abaqaphela ngokwengeziwe izinzuzo ze-resveratrol, ukufunwa kwama-resveratrol supplements kuye kwanda kakhulu emakethe. Lokhu kuholele ekutheni izinkampani ezikhiqizayo zibangisane ukukhiqiza izithasiselo ezisezingeni eliphakeme ezizobamba iqhaza emakethe. Uma ungumenzi wezithako zezempilo ohlela ukungena emakethe ye-resveratrol supplements, kufanele uqinisekise ukuthi uthola i-resveratrol powder esezingeni eliphakeme kakhulu. Ukuhlwaya izinto ezisezingeni elihle kuyisinyathelo sokuqala ekuqinisekiseni impumelelo yanoma yiliphi ibhizinisi.
Uma ufuna indawo thenga i-resveratrol powder ngobuningi, inkampani eyodwa ongayethemba ngokungaboni ngokuthola impahla eluhlaza yiCofttek. Le nkampani, ngenxa yethimba layo lokucwaninga eliqinile kanye nomnyango wokuthengisa ozinikele, isungule ubukhona bomhlaba wonke ngesikhathi esincane nje - inamakhasimende nabalingani emhlabeni jikelele. I-resveratrol ekhiqizwe yinkampani iza ngamaqoqo amakhulu ama-25 kgs futhi itholakala kwizithako ezisezingeni eliphakeme kakhulu, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukuthi izithasiselo ezikhiqizwe kuyo zingathenjwa ngekhwalithi nokusebenza kahle. Uma ufuna ukuthenga i-resveratrol ngobuningi, ukuphela kwendawo ongathenga kuyo yi-cofttek.com.
(1) Sonia L. Ramírez-Garza, Emily P. Laveriano-Santos, María Marhuenda-Muñoz, Carolina E. Storniolo, Anna Tress ter-Rimbau, Anna Vallverdú-Queralt noRosa M. Lamuela-Raventós1 (2018) Imiphumela Yezempilo yeReververrol: Imiphumela Yezilingo Zokungenelela Kwabantu, Nutrients.10 (12)
(2) UBahare Salehi, Abhay Prakash Mishra, Manisha Nigam, Bilge Sener, Mehtap Kilic, Mehdi Sharifi-Rad, Patrick Valere Tsouh Fokou, Natália Martins, noJavad Sharifi-Rad (2018) I-Resveratrol: Inkemba Ehlelwe Kabili Kwenzuzo Yezempilo. 6 (3).
(3) U-Adi Y. Berman, uRachel A. Motechin, uMaia Y. Wiesenfeld noMarina K. Holz (2017) Amandla okwelapha e-resveratrol: ukubuyekeza kwezivivinyo zokwelashwa, ivolumu ye-Prepision Oncology 1, inombolo ye-Article: 35 edn.
(5) Uhambo lokuhlola i-egt.
(6) I-Oleoylethanolamide (oea) –i-wand yemilingo yempilo yakho.
(7) I-Anandamide vs cbd: yikuphi okungcono empilweni yakho? Konke odinga ukukwazi ngabo!
(8) Konke odinga ukukwazi mayelana ne-nicotinamide riboside chloride.
(9) Izithasiselo ze-Magnesium l-threonate: izinzuzo, isilinganiso, nemiphumela emibi.
(10) I-Palmitoylethanolamide (ipea): izinzuzo, isilinganiso, ukusetshenziswa, ukwengeza.
(11) Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(12) Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13) Isengezo esihle kakhulu se-alpha gpc.
(14) Isengezo esihle kakhulu sokulwa nokuguga se-nicotinamide mononucleotide (nmn).